Accueil > Gazetin'ny nosy > Filoha Hery Rajaonarimampianina: Leo tanteraka azy ny vahoaka Malagasy
Filoha Hery Rajaonarimampianina: Leo tanteraka azy ny vahoaka Malagasy
Fomban’ny olona nahazo toerana no mifikitra amin’izany na dia efa tsy tian’ny vahoaka intsony aza. Ny lalàna sisa no ahindrahindran’izy ireny fa mametraka azy amin’ny toerana ka tsy maintsy lalàna koa no manala azy eo. Izany no taim-bava avokan’ireo mpomba azy rehefa tsy mahita havaly ny vahoaka izay efa leo azy izy ireo.
Izany toe-javatra izany no mitranga eto Madagasikara tao anatin’ny taona roa teo izay. Nahatsapa ny Malagasy fa tsy izy intsony ny fitantanana ny firenena. Ohatra vitsivitsy no hilazana izany feom-bahoaka izany.
Manjaka tanteraka ny fanamparam-pahefana ataon’ny vadin’ny filoham-pirenena Voahangy Rajaonarimampianina ka andrenesana azy avokoa izay zavatra ahitana raharaha tsy manjary amin’ny fiainam-pirenena. Na dia tsy nanao politika velively tamin’ny androm-piainany ity ramatoa ity dia izy no mibaiko izany amin’izao fotoana izao. Hatramin’ny fanendrena ny praiminisitra sy ny olona ho mpikambana ao amin’ny governemanta ary ireo mpiasam-panjakana ambony dia ity ramatoa ity avokoa no heno matetika fa tompon-teny farany. Ohatra amin’izany ny fanesorana an’ingahy Ravelonarivo Jean farany teo iny. Mandeha koa ny resaka fa efa misy koa ny disadisa amin’ity ramatoa ity sy ingahy praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly, ka asa indray izay hiafaran’izany. Natao toa ny biby fampitahorana tokoa ity ramatoa Voahangy Rajaonarimampianina ity amin’izao fotoana izao. Ny Malagasy nefa dia aoka hazava fa tsy nifidy azy velively ho mpitondra firenena fa ny vadiny Hery Rajaonarimampianina no voafidy amin’izany. Tsy izany ihany fa hatramin’ny zanakin’ny filoham-pirenena sy ny rahalahiny dia voateninteny tamin’ny resaka harena ankibon’ny tany avokoa ka isan’ny voatonontonona tamin’ireny raharaha ireny. Ingahy Mathieu, dia nalaza be tamin’ny raharahan’Anjozorobe, ka nahafaty ilay mpiambina akaiky ny zandary iray tao Ankadilalana iny taona iray lasa izay. Niady hatramin’ny samy mpitandro filaminana tamin’ireny raharaha ireny. Hoan’ny rahalahiny indray dia tao amin’ny fitrandrahana vato tao Besoa Antsirabe no nampalaza azy. Nisian’ny fanamparam-pahefana avokoa ireny ary nipetrahan’ny kolikoly avo lenta tsy hita izay natao azy satria hatrany amin’ny fitsarana no sahirana vokatr’izany.
Teo amin’ny manodidina an’ingahy Hery Rajaonarimampianina indray dia niavaka tanteraka ilay mpanolotsaina Claudine Razaimamonjy izay mpanolotsaina manokana tao amin’ity filoham-pirenena ity. Nibaiko ny mpiasam-panjakana ambony rehetra tsy ankanavaka teto amin’ny firenena iny ramatoa iny. Nanaovany ampihimamba ny tsenam-barotrin’ny fanjakana rehetra ka maro no nandraingiraingy ireo mpisehatra hafa tamin’ity sehatra ity. Izy no nibaiko ny “marché” rehetra tany amin’ny fanjakana. Rehefa noteren’ny komity iraisam-pirenena ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina dia nampiditra am-ponja tsy fidiny ity ramatoa ity mba hatao sorona. Tsy Claudine velively nefa no namoaka ny vola fa ny tompon’andraikitra ny “marché” ireny no tena nanao izany ka isan’izany ny praiminisitra Solonandrasana Olivier Mahafaly amin’izao fotoana izao, izay namoaka ny “ budget exceptionel”hoan’ny kaominina maro manerana ny Nosy, izay naira-niasa tamin’ity ramatoa ity ka niteraka kolikoly avo lenta teto amin’ny firenena. Minisitra maro koa no voalaza ary mpiasam-panjakana ambony no voarohirohy amin’ny raharaha Claudine iny ary mbola andrasan’ny maro ny tohiny satria ity ramatoa ity irery hatreto no mbola niditra am-ponja vonjimaika. Ny Bianco moa dia milaza fa ny raharaha iray no mbola tapitra ny fanadihadiana tamin’ity ramatoa ity fa mbola misy hafa koa mbola miandry azy. Tsy maintsy olona ambony amin’ny fanjakana misy amin’izao fotoana izao ireo ka handrasan-tsika ny tohiny.
Tsy ny volam-panjakana ihany no olana fa tao koa ny raharaha andramena sy vatosoa sy volamena ary ny biby sy ny zavamaniry tsy misy raha tsy eto Madagasikara, izay aondran’ny olona mifandray amin’ny fanjakana io an-tsokosoko any ivelany. Ny raharahan’ny fitrandrahana ataon’ny sinoa sy ny karana ary ny “thailandais” izay manao tantely afa-drakotra ny harem-pirenena miaraka amin’ny mpitondra fanjakana.
Mbola olana koa ny mahakasika ny tsy fandriampahalemana any antanan-dehibe sy ny asan-dahalo any ambanivohitra. Tsy misy toa izao hatramin’ny nipoiran’ny voamaso hoy ny fitenenana. Tsy hadinon’ny olona ny raharaha “kidnapping” izay niteraka resabe teo amin’ny tontolon’ny politika satria raha nitranga ny raharaha Arnaud mianadahy tany Toamasina taona vitsy lasa izay dia ny mpanolotsainan’ny filohampirenena antsoina hoe Nicole no tonga tany Toamasina naka ireo voapanga handeha aty Antananarivo.
Miampy ireo ankehitriny ny fidangan’ny vidim-piainana ka tao anatin’ny telo volana dia niakatra 100% ny vidim-bary eto Madagasikara.
Santionany amin’ny tsy fahaizan’ingahy Hery Rajaonarimampianina mitondra ny firenena ireo. Maro no azo lazaina fa apetraka eo aloha ny androany. Izany no antony maha leo an’ity filoham-pirenena ity ny Malagasy manontolo. Asa na mba tsapany izany na tsia fa mijaly ny vahoaka tamin’izao fotoana nitondrany izao.